Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 52
Ny fihomehezana dia fanehoana ny fihevitry ny saina sy ny fihetseham-po amin'ny alàlan'ny feo avo lenta. Miankina amin'ny tsirairay sy ny toe-javatra mampihomehy ny fihomehezany, miankina amin'ny karazana sy ny fihomehezana; toy ny goavambe, titter, gurgle, ny tanora tsotra sy mampanan-karena; ny fihomehezana, ny mamy, na ny fo mihomehy amin'ny toetra tsara mandala; ny hehy fihomehezana, fanesoana, fanalana baraka, fanalana baraka, fanalana baraka, faniratsiraana. Avy eo dia misy ny fihomehezana mahatsiravina an'ny mpihatsaravelatsihy.
Ny fihomehezana dia azo antoka fa mpanondro ny toetra sy ny fampifangaroana ny vatana sy ny sain'ny olona mihomehy, satria ny kabary no fambara ny fivoaran'ny saina izay manome azy ny articulation. Ny hatsiaka amin'ny loha, ny hozatra, na ny aretina hafa ara-batana, dia mety hisy fiantraikany sy ny fihodinan'ny fihomehezana, fa ny fanelingelenana ara-batana toy izany dia tsy afaka manafina ny fanahy sy ny toetra izay miditra ao amin'izany fihomehezana izany.
Ny fihenjanan'ny fihomehezana ara-batana dia vokatry ny hetsika ataon'ireo tadim-peo sy larynx amin'ny herin'ny rivotra manidina azy ireo. Saingy ny toe-tsaina ao an-tsaina amin'ny fotoana fihomehezana dia manome ny fanahy amin'ny fihomehezana, ary mihetsika amin'ny rafi-pitondrana tahaka ny hanery ny fihetsehana hozatra sy ny feo toy izany izay hanome vatana sy kalitao ho an'ny feo izay itiavan'ny fanahin'ny hehy. naneho.
Toy ny maro amin'ireo zava-mahatalanjona eo amin'ny fiainana dia mihomehy ny fihomehezana ka tsy hita izay mahafinaritra. Mahafinaritra.
Raha tsy misy saina dia tsy misy fihomehezana. Mba hahafahana mihomehy dia tsy maintsy manana saina. Ny olona adala dia afaka mitabataba, fa tsy mahazo mihomehy. Ny rajako iray dia afaka maka tahaka sy manao grimaces, nefa tsy afaka mihomehy izany. Ny boloky iray dia afaka manahaka ny feon'ny hehy, nefa tsy afaka mihomehy izany. Tsy fantatra izay miezaka mampihomehy; ary fantatry ny rehetra manodidina ny hoe misy boloky dia manahaka ny fihomehezana. Mety handroso sy mivolom-borona ary koa ny vorona eny amin'ny hazavan'ny masoandro, fa tsy misy fihomehezana; ny saka sy ny kittens dia mety ho purr, roll, poun na paw, saingy tsy mety mihomehy izy ireo. Ny alika sy ny alika dia mety hikiry sy hitsambikina ary hodi-jaza amin'ny fanatanjahan-tena milalao, nefa tsy omena azy ireo hihomehezana. Indraindray rehefa misy alika mijery ny tarehin'olombelona amin'ny antsoina hoe "faharanitan-tsaina toy izany" sy amin'ny fahitana azy ho toy ny fijerena fahitana, azo lazaina fa angamba mahatakatra ny fahafinaretana izy ary mitady hihomehy; nefa tsy afaka. Tsy mahay mihomehy ny biby iray. Indraindray ny biby sasany dia afaka manahaka ny fitenin'ny feo fa tsy fahalalana amin'ny teny izany. Mety am-bava fotsiny ve izany. Ny alika tsy mahazo ny dikan'ny teny na ny fihomehezana. Amin'ny tsara indrindra dia afaka manome taratra ny fanirian'ny tompony izy ary amin'ny lafiny sasany dia mamaly izany faniriana izany.
Ny fihomehezana dia fanehoana fankasitrahana vetivety avy amin'ny saina, toe-javatra iray izay tsy nampoizina tampoka ny zavatra tsy fahatokiana, fahamaotinana, tsy fitoviana, tsy fahatomombanana. Io fepetra io dia omen'ny sasany mitranga, na hetsika, na amin'ny teny.
Mba hahazoana ny tombontsoa feno fihomehezana sy ho afaka mihomehy mora, ny saina tsy maintsy, ankoatra ny haingana haingana hahatakatra ny fahasosorana, ny tsy fahatongavana, ny tsy nampoizina ny toe-javatra iray. ampitomboina ny fakana sary an-tsaina azy. Raha tsy misy ny imaginativeness, ny saina dia tsy hahita toe-javatra mihoatra ny iray, ary noho izany dia tsy misy fankasitrahana marina. Saingy rehefa misy sary an-tsaina, ny sary dia haingana haka sary an-tsaina ny fisehoan-javatra sy toe-javatra mampihomehy hafa ary mitantara ny tsy fitoviana.
Ny olona sasany dia mahatakatra toe-javatra iray ary mahita ny teboka vazivazy. Mety ho takatry ny hafa ny toe-javatra, nefa tsy mahita an-tsaina hoe inona no tondroina na hitondrana azy ary inona no ifandraisany, ary miadana izy ireo mahita ny hevitry ny vazivazy na ny mahatsikaiky sy maneso rehefa mahita ny antony mihomehy ny olona hafa.
Ny ihomehezana dia ilaina amin'ny fampandrosoana ny zanak'olombelona ary indrindra amin'ny fivoaran'ny saina ahafahana mameno ny toe-piainana rehetra. Tsy dia mihomehy intsony ny fanerena sy ny fahasahiranana. Rehefa mitaky ady mitohy hatrany ny fiainana mba hisianana, rehefa miady amin'ny tany ny ady sy ny pes-tilence, rehefa maty ny vokatry ny afo sy ny tondra-drano ary ny horohoron-tany dia ny horohoro sy ny fahasahiranana ihany no hita. Ny toe-javatra toy izany dia mahatonga ny fiaretana sy tanjaky ny saina ary haingana ny asa. Ireo toetra tsara ao an-tsaina ireo dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fiatrehana sy ny fandresena ireo toe-javatra ireo. Fa ny saina koa mila fahamaivana sy fahasoavana. Manomboka mampivoatra poise, fahamorana, fahasoavana, amin'ny fihomehezana ny saina. Ilaina ny fihomehezana mba hahamendrehana sy fahasoavan'ny saina. Raha vantany vao omena ny filana ilaina ny fiainana, ary manomboka manome toerana be dia be, tonga ny fihomehezana. Mahatonga ny saina tsy hihena ny saina ary manaisotra ny hamafiny. Manampy ny saina hahita ny hazavana sy miramirana eo amin'ny fiainana ny zaza, ary koa ny maizina sy ny hatsiaka. Manala ny sain'ny saina ny fihomehezana aorian'ny ady rehefa miady amin'ny zava-dehibe sy hentitra ary mahatsiravina. Mifanaraka amin'ny saina ny ezaka ny fihomehezana. Amin'ny fahazoana hery mihomehy, afaka manavao ny heriny ny saina ary miatrika zava-tsarotra, misoroka ny melisiana ary misy hadalana mihitsy aza, ary matetika manala ny aretina na ny aretina. Rehefa olona mifantoka loatra amin'ny fihomehezana ny lehilahy iray, dia ny fitiavana ny fihomehezana no misakana azy tsy hankasitraka ny maha-zava-dehibe ny andraikitra, ny andraikitra, ny adidy ary ny asan'ny fiainana. Ny olona tahaka izany dia mety ho mora sy tsara sy tsara, mety hahita zavatra mampihomehy, ary ho lasa raiki-tampisaka, mpiara-miasa tsara. Saingy rehefa manohy mampihomehy ny fihomehezana izy, dia mihamalemy sy tsy mendrika amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Mety hamindra fo sy hihomehy ilay lehilahy heveriny ho zava-dehibe amin'ny fiainana izy, kanefa takany sy tsy mankasitraka ny fiainana fa tsy tsara lavitra noho ny olona mandalo fiainana mitondra fo mahery ary mavesatra amin'ny frown.
Ny ankamaroan'ny toetran'ny lehilahy dia mety ho fantatra amin'ny fotoana fohy amin'ny fihomehezana noho ny teniny, satria manandrana kely manafina izy ary tsy manafina ao amin'ny fihomehezany. Amin'ny teny azony atao ary matetika izy no midika mifanohitra amin'ny zavatra lazainy.
Zara raha misy olona tsy handray tsara ny mpanankarena, feno feo ary feno fihomehezana ny fankasitrahana ny vetaveta sy ny hatsikana tsara izay nivezivezy ao anaty ny feony sy ny toerany, ary iza no tsy hahomby amin'ny fandalovana sy ny fofon'aina tsy misy na inona na inona olona izay mieboebo am-perinasa ao anaty kapoany na fandroany, na tsia ilay hetsika. Na fantatry ny fihomehezana ny olona iray na tsia. Ireo izay manana fironana amin'ny fanaintainam-po, na mifanaraka na histeria dia haneho azy ireo amin'ny alàlan'ny fihosin'izy ireo fohy, gaza spasmodika, na ny fihorakorahana mihomehy mafy azy ireo. Ny feo mikotroka, rasping, metallika, ny azy, ny moka no manondro ny toetra satria azo antoka fa ny toetra boribory tsara dia naseho tamin'ny firindrany ao amin'ny fihomehezana. Ny fahavoazana amin'ny fihomehezana dia mampiseho fivoarana tsara amin'ny toetra, na inona na inona mety hitranga ny fihomehezana. Ny rantsantanana amin'ny fihomehezana dia mampiseho ny tsy fivoaran'ny toetra amam-panahy iray, na inona na inona fomba iray mety hanandrana manafina izay tsy ampy azy. Manome firindrana amin'ny fihomehezana ny fanamafisam-peo, raha miforona ny toetra. Ny tonony, ny tsipika ary ny feon'ny tsy fifankahazoana amin'ny fihomehezana, dia manondro ny tsy fisian'izany na mihodinkodina amin'ny fampandrosoana ny toetra.
Ny iray manana magnetism amin'ny fihomehezana dia matetika dia iray amin'ny toe-tsaina voajanahary sy mahatsikaiky. Ny fetsy sy ny fetsy ary ny fadimbadika ary ny lozabe dia handroaka ny fihomehezany, na dia mety hisarika na mamitaka ny teniny aza izy ireo.